नि: शुल्क Online Photoshop सम्पादक
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Online Photoshop डाउनलोड गर्नुहोस्
यो उपकरण नि: शुल्क हो फोटोशपको विकल्प अनलाइन प्रदान गरिएको र तपाईंको आधारभूत छवि संपादन आवश्यकताहरू महसुस गर्न विकासकर्ताहरूले सिर्जना गरेको हो। online Photoshop खरीद गर्नु अघि यो साधारण उपकरणको परीक्षण गर्नुहोस्।
FAQ - Online Photoshop
यो एडोब Online Photoshop को पूर्ण संस्करण हो?
होईन, यो अनलाईन फोटोशप संस्करण होईन। यो एक हो नि: शुल्क छवि सम्पादक सीमित सरल प्रकार्यहरूको साथ जुन तपाईं अनलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई Online Photoshop सम्पादक पनि भन्छन् किनकि तपाईं .psd (फोटोशप ढाँचा), .xd र .raw फाईलहरू, साथै तपाईंको ब्राउजरमा अन्य लोकप्रिय छवि ढाँचा सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ।
के मैले यस उपकरण अनलाइन प्रयोग गर्नका लागि दर्ता गर्नु पर्छ?
होईन, तपाई यो उपकरण खोल्न सक्नुहुनेछ यो पृष्ठ खोले पछि।
यो अनलाइन उपकरण धेरै सरल छ र फोटोशपसँग तुलना गर्न सकिँदैन। अधिक उत्पादक कार्यको लागि हाम्रो सल्लाह एडोब online Photoshop किन्नु हो।
के म यो उपकरणलाई व्यावसायिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, तपाईं आधारभूत कामको लागि यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर अतिरिक्त केहि पनि छैन। यसको कार्यक्षमता दैनिक आधारमा विस्तार गरिएको छ, तर उपलब्ध प्रकार्यहरू पेशेवर तस्विर पुनःप्राप्ति र वेब डिजाईन गर्नको लागि पर्याप्त छैनन्। यदि तपाईं आफ्नै तस्विरहरू सम्पादन गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ फोटो सम्पादन सेवा विज्ञहरु बाट र आफ्नो फोटोहरु केहि दिन भित्र गर्न को लागी प्रति फोटो get2बाट।
के म यो नि: शुल्क उपकरण डाउनलोड गर्न सक्छु?
होइन, तपाईं यो उपकरण कुनै पनि ब्राउजरमा अनलाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कम्प्युटरमा डेस्कटप संस्करण प्रयोग गर्नका लागि तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्छ Adobe Photoshop online एडोब आधिकारिक वेबसाइटमा अनलाइन र अफलाइन प्रयोग गर्नुहोस्।
Online Photoshop ट्यूटोरियलहरू: